» सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत आयोजना, के-के छन् चुनौती ?
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत आयोजना, के-के छन् चुनौती ?
२०७७ फाल्गुन २०, बिहीबार २१:०५
जलविद्युत्को अपार सम्भावना भए पनि राज्यले सुदूरपश्चिमलाई चिन्न नसकेको प्रदेशवासीको गुनासो छ । बाह्रै महिना अटुट रुपमा बगिरहने सेती, महाकाली, चमेलिया, कालङ्गा, बूढीगङ्गालगायत अन्य साना नदीबाट हजारौँैँ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ ।
यस्तै सुदूरपश्चिममा दर्जनौँ परियोजना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माणका लागि इजाजत लिने प्रक्रियामा छन् । कतिपय आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सकेर निर्माणका लागि बोलपत्रको प्रक्रिया चलेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैँले निर्माण गर्ने गरी तल्कोट गाउँपालिकामै २१० मेगावाटको चैनपुर सेतीखोला जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भई निर्माणको तयारीमा छ ।
त्यस्तै ५ मेगावाट क्षमताको बूढीगङ्गा जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणको तयारीमा छ । रिलायवल हाइड्रो कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । पहिलो चरणको काम सकेर निर्माण कम्पनी अघि बढेको छ । दार्चुलामा १३.९४ मेगावाट क्षमताको आयुछटी गाड जलविद्युत् आयोजना, ३५ मेगावाटको मध्यचमेलिया जलविद्युत् आयोजना र १० मेगावाटको मकरीगाड जलविद्युत् आयोजनाले पनि निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बग्ने नदी र खोलाबाट मात्रै १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव अनुप उपाध्याय बताउँछन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत् आयोजनाको ठूलो सम्भावना छ ।
सरकारको नीति र झन्झटिलो प्रक्रिया र बेवास्ताका कारण आयोजना निर्माण हुन सकेका छैनन् । उपाध्यायले प्रदेशमा ६ हजार ४०० मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली आयोजना, ४५० मेगावाटको पश्चिम सेती परियोजना र १० हजार ८०० क्षमताको कर्णाली परियोजना महत्पूर्ण आयोजना हुन् । यी परियोजना निर्माण गर्न निकै चुनौती छ । कतिपय सरकारी नीतिका कारण त कतिपय आयोजनाको भौगोलिक अवस्था र निर्माणका बेला हुने विभिन्न बाधाका कारण परियोजना बन्न असम्भव छ ।
कर्णाली परियोजनाको लागत पनि बढी हुन्छ । सरकारले लगानी लगाउँदैन । निजी क्षेत्रको लगानी त्यति छैन । वैदेशिक लगानीका लागि वातावरण छैन । त्यसैले सयौं वर्षसम्म यी योजना बन्दैनन् । बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा पनि राजनीतिक दलहरुले विभिन्न बाहाना गरेर निर्माण हुन नदिन खोजेको पूर्वसचिव उपाध्यायको भनाइ छ । उपाध्यायका अनुसार कुनै पनि क्षेत्रलाई प्रभाव नपार्ने यो आयोजनाको डिपिआर तयार भइसकेको र निर्माणका लागि प्रक्रिया शुरु गर्दा राजनीतिक दलले यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।
आफ्नो धेरै स्रोत खर्च हुने र लगानी उठाउन समय लाग्ने गरेको निजी जलविद्युत् उत्पादक आफ्ना परियोजना र पैसा अन्यत्र लैजाने गरेको अपि हाईड्रो पावरका सञ्चालक द्वारिका न्यौपानेले बताए । “सरकारको नियमन प्रक्रिया मात्र होइन, कानूनी संरचना पनि गतिला छैनन् । आयोजना निमार्णका लागि सिफारिस माग्दा वा स्वीकृत लिँदा प्राधिकरणदेखि मन्त्रालयसम्म पैसाको बिटो बुझाउनुपर्छ ” न्यौपानेले भने ।
पैसा नदिई काम हुदैन । अनि यस्ता आयोजना कसरी निमार्ण हुन्छन् । आयोजना निमार्णको झण्डै आधा बजेट कागजात प्रक्रियामै खर्च हुने गरेको छ । सुदूरपश्चिममा जलविद्युत् आयोजनाको अथाहा सम्भावना भएका यस विषयमा प्रदेश सरकार चनाखो हुनुपर्ने न्यौपानेले बताएका छन् । हामीलाई सहयोग कतैबाट हुदैन । हामीले लगानी जोखिममा पारेर आयोजना बनाउँदै छौं । यति गर्दा पनि सरकारको चित्त बुझेको छैन । कहिले निमार्णस्थलमा बाधा पुग्छ । कहिले मन्त्रालयमा । सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गर्नका लागि आयोजनाको निमार्ण प्रक्रियामा कुनै बाधा नपर्ने गरी सहयोग गरे मात्र देशभरमा एक वर्षभित्र हजारौं मेघावाट निमार्ण गर्न सकिने न्यौपानेको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले यस्ता आयोजनाका विषयमा विशेष चासो लिनुपर्ने कतिपयको भनाइ छ । प्रदेशमा अथाहा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि इच्छाशक्ति नहुँदा र निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित नहुँदा लगानीकर्ता डराउने गरेका छन् । आयोजना निमार्णस्थलका स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले चासो लिनु आवश्यक छ । जलविद्युत् आयोजना निमार्णका बेला हुने साना तिनादेखि ठूला झैझगडा, तथा सम्बोधन गर्न नसकिने माग तेस्र्याएर आन्दोलन गरी आयोजना निमार्णमा बाधा पुर्याउने काम हुने गरेकोका छन् । जलविद्युत् निमार्ण भइसकेपछि यसबाट प्राप्त रोयल्टीले नगरपालिका र गाउँपालिकाको आर्थिकस्तरमाथि उठने हुँदा यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक रहेको छ । रासस